SomaliTalk.com » Oslo: Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya oo la kulmay Ra’iisul Wasaarahii hore ee Norway
Warsaxaafadeed ka soooo baxay xafiiska ra’iisul wasaaraha DFS ayaa tibaaxay in “Cabdiweli Sheekh Axmed uu la kulmay Ra’iisul Wasaarihii hore ee dalka Norway Mudane Kjell Magne Bondavic,” ayagoo sida warsaxaafadeedku sheegay “ka wada hadlay xoojinta taageerada loo fidiyo hay’adaha kala duwan ee dawladda Soomaaliya.”
Warsaxaafadeedkii oo dhan hoos ka akhri
War-saxaafadeed: Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya oo Oslo kula kulmay Ra’iisul Wasaaraha dalka Norway.
Jimco, 19 September 2014 …… Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Mudane Cabdiweli Sheekh Axmed iyo wafdi uu hogaaminayo oo ay kamid yihiin Wasiirka Warfaafinta , Mustaf Sheekh Cali Dhuxulow iyo xubno kale oo booqasho rasmi ah ku yimid dalka Norway ayaa maanta magaalada Oslo waxaa ay kulan dheer kula yeesheen Ra’iisul Wasaaraha dalka Norway Marwo Erna Solberg iyo xubno ka tirsan Gollaha Wasiirada ee dalka Norway iyagoo ka wada hadlay xiriirka dheer ee u dhexeeya labada dal iyo taageerada Norway ee dib-u-dhiska Soomaaliya.
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya ayaa sheegay in uu uga mahadcelinayo dalka Norway taageerada ay u fidiso dawladda Soomaaliya, waxaana uu uga mahadceliyay soo dhoweynta ay u fidiyeen dadka Soomaaliyeed ee ku nool dalka oo lagu qiyaaso 40’000 oo Soomaali ah. Ra’iisul Wasaaraha ayaa soo dhoweeyay sida dawladda Norway ay xilligan ugu heelan tahay in ay gacan ka gaysto dadaalada lagu xasilinayo dalka iyo dhismaha dawladnimada Soomaaliya. Waxaa sidoo kale ay ka wada hadleen labada dhinac taageerada Waxbarashada, Gargaarka Bani’aadanimo, Shaqo-abuurka iyo in ay Soomaaliya laga caawiyo sidii ay u maamulan lahayd khayraadka dalkeeda.